गर्मीमा निर्जलीकरणबाट बच्न प्रभावकारी हुन सक्छ यी ५ जुस !! | सुदुरपश्चिम खबर
गर्मीमा निर्जलीकरणबाट बच्न प्रभावकारी हुन सक्छ यी ५ जुस !!
मौसम र महको जुस पनि शरीरमा डिहाइड्रेसनको लागि उपयुक्त विधि हो । यस्तो जुस बनाउन तपाईंसँग चुना, चिनी वा मह, भुटेको जीरा, चाट मसाला वा कालो नुन हुनुपर्छ । पहिले चुनालाई मिक्सरमा हाल्नुहोस् र यसको जुस निकाल्नुहोस्। उक्त रसमा महमा घोल्नुहोस् र यसलाई गिलासमा भर्नुहोस्। भुटेको जीरा र चार्ट मसलाको साथ अलिकति कालो नुन पनि थप्नुहोस् र केही आइस क्युब्स थप्नुहोस् । त्यसपछि जुस तयार हुन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार